[Wednesday, June 14th, 17] :: Maxkamadda ciidamada oo soo gabagabeysay kiiskii lagu dilay wasiir Cabaas Siraaji
Muqdisho (RH) Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta oo Arbaca ah soo gabagabeysay kiiska la xiriira dilkii wasiirikii howlaha guud iyo dibka u dhiska Soomaaliya, Marxuum Cabaas Siraaj oo lagu dilay Muqdisho.
Maxkamadda ayaa tan iyo markii uu dhacay dilka allaha u naxariisto wasiir Cabaas Siraaji oo ahaa 3-dii bishii May, waxaa dhageysaneysay eedaha loo heesto labada nin ee loo soo xiray falkaas oo kala ah; Dable Xoogga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ceydiid iyo Seddax Alifle Cismaan Salaad Barre oo ilaalo u ahaa hantidhowrkii guud ee qaranka Nuur Faarax Jimcaale.
Maxkamadda ayaa maanta lagu soo bandhigay qoraalo iyo sawirro caddeenaya sida uu u dhacay dilka iyo cidda fulisay, waxaana soo diyaariyey Xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Dilka wasiirka ayaa lagu eedeeyay in uu geestay dable xoogga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ceydiid halka Seddax Alifle Cismaan Salaad Barre lagu eedeeyay in uu ku kacay mas’uuliyad darro maadama uu arkayey xilliga la dilayey wasiirka.
Maxkamadda ayaa lagu soo bandhiyay nooca xabadda lagu dhuftay wasiirka, baaritaan lagu sameeyay dilka markii uu dhacay kaddib.
Intaas kaddib, waxaa goobta ka hadlay qareenada difaacaya eedesanayaasha, kuwaasoo sheegay in dable Xoogga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ceydiid in uu falkaas u sameeyay si aan ula kac ahayn isla markaana ay magdhow ka bixinayaan dilka marxuumka, balse waxa ay dood ka dhalatay dacwadda loo heysto Seddax Alifle Cismaan Salaad Barre maadama uusan falka dilka waxbka ka geesan sababta loo soo xiray.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashanle Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in kiiska dacwadan ay soo dhammaatay isla markaana maxkamadda wixii hadda ka dambeeya ay la wareegi doonto iyadoo soo saari doonta go’aan rasmi ah.
Goobta maxkamadda waxaa ku sugnaa ehelada labada dhinac ee kiiska uu ka dhexeeyo, dadweyne fara badan oo u soo daawasho tagay bal in ay goobjoog ka noqdaan sida uu u dhacayo go’aanka, abukaatayaal u doodaya dadka la soo eedeeyay iyo saraakiil ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta qaranka.
Dilkii wasiir Cabaas ayaa aad looga naxay, waxaana uu ahaa wasiirkii ugu da’da yaraa wasiirada xukuumadda maanta, sidoo kale wuxuu ahaa nin markii horre qaxootinimo ku soo koray isagoo lahaa hami aad u weyn oo ku saaban in uu dalkiisa horumar gaarsiiyo.
Waxaa kaloo dilka marxuumka shaqada looga eryay hantidhowrkii guud ee dowladda Nuur Faarax Jimcaale in kastoo markii dambe uu ku doodday in aan xil laga qaaddi karin.
posted on Wednesday, June 14th, 17